.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: HTML Colour Code တွေ အလွယ်ယူဖို့ Flash ဖိုင်လေးတွေပါ
HTML Colour Code တွေ အလွယ်ယူဖို့ Flash ဖိုင်လေးတွေပါ
ကဲ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်လေးကို ရောက်လာကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲ HTML/ CSS ကုတ်တွေ
လေ့လာနေကြတဲ့သူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ HTML နဲ့ နောက်ခံအရောင်တွေ ဘောင်အရောင်တွေ
စသည်ဖြင့် CSS ဆိုလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။ အသုံးတည့်မယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။ အရင်က အဲလို
အရောင်ကုတ်တွေ ယူဖို့အတွက်ကို ဆော့ဝဲလ်တွေတောင် Install လုပ်ပြီး သုံးကြတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
ခု ဒီ Flash ဖိုင်တွေကတော့ Website တွေပေါ်မှာတင် သုံးလို့ ရသလို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး ကိုယ့်စက်မှာ
သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်နော်..အောက်မှာ လင့်လေးတွေ ပေးထားပါတယ်။
ဒါက အပေါ်က Flash ဖိုင်လင့်လေးပါ !>> https://sites.google.com/site/thurainlin89/color.swf
ဒါကတော့ အောက်က Flash ဖိုင်လင့်ပါ !>>https://sites.google.com/site/thurainlin89/colors.swf